Shiinaha warshad duudduuban oo koronto leh iyo soosaarayaal | Yuantuo
Isu-uruurinta Rullaluistemadka Wareejiya
Wareegga Wareejinta Wareegga
Duub aan awood lahayn
Double Groove Roller Conical
Rullaluistemadka Kornayl Grooved
Rubber dahaarka Coone Conveying Roller
Ahama Roller Lone Roller
Rogista Conical Conveyor Roller
Wareejiyaha Suunka Qalooca
Midiyaha Wareejinta Suunka Edge
O Wareejiyaha Suunka
Leveler Wixii Conveyor
Ahama rullaluistemadka koorta ahama
Rubber dahaarka leh koofiyad gudbinta rullaluistemadka
Rullaluistemadka koorta la jeexjeexay
Double jeexdin jeexdin rullaluistemadka
Xulashada biraha wax lagu xiro ee birta ah ee birta ah 1. Xulashada dhererka rullaluistemadka: Alaabta leh ballacyo kala duwan, rullaluistemadka leh ballac ku habboon waa in la xusho. Guud ahaan, "gaarsiinta + 50mm" waa la qaatay. 2. Xulista dhumucda derbiga iyo dhexroor usheeda dhexe ee rullaluistemadka: Marka loo eego culeyska alaab gaareysa oo si siman loogu qaybiyey rollers-ka xiriirka, xisaabi culeyska loo baahan yahay ee rullaluistem kasta, si loo go'aamiyo dhumucda derbiga iyo dhexroorka usheeda dhexe ee rullaluistemadka. 3. Waxyaabaha duuban a ...
Xulista mashiinka birta birta ah ee birta ah
1. Duub xulashada dhererka:
Alaabooyinka leh ballacyo kala duwan, rullaluistemadka leh ballac ku habboon waa in la xusho. Guud ahaan, "gaarsiinta + 50mm" waa la qaatay.
2. Xulista dhumucda derbiga iyo dhexroorka usheeda dhexe ee rullaluistemadka:
Marka loo eego miisaanka maaddada gaarsiinta oo si siman loogu qaybiyo rollers-yada xiriirka, xisaabiya culeyska loo baahan yahay ee duubab walba, si loo go'aamiyo dhumucda derbiga iyo dhexroorka usheeda dhexe ee rullaluistemadka.
3. Waxyaabaha duuban iyo daaweynta dusha sare:
Marka loo eego jawiga gudbinta ee kala duwan, go'aaminta qalabka iyo daaweynta dusha sare ee rullaluistemadka (bir bir ah, bir bir ah, bir madow ama dahaarka leh).
Taxaddarrada hawlgalka duuban:
1. Ha saarin gacmahaaga iyo lugahaaga inta udhaxeysa qadka inta lagu jiro howlgalka khadka, haddii kale, shilalka dhaawaca ayaa dhici kara;
2. Waa mamnuuc in aaladda iyo qoraxda la saaro jidhka siligga;
3. Markaad ku dhejineyso qalabka shaqada (saxanka qalabka) ee khadka, waa in la dhigaa bartamaha jirka safka si tartiib ah si looga fogaado in waxyeello u geysato rullaluistemadka saameyn adag;
Soo-saarka rullaluistemadka iyo xulashada waa sida soo socota:
Xulka xulashada dhexroor: 50mm, 60mm, 76mm
Xulashada qalabka wax lagu duubo: birta birta ah ee birta ah, birta birta ah ee birta ah, dahaadhka birta ee birta, PVC, birta aan lahayn, tuubbo aan xuduud lahayn, iwm.
Xulashada nooca rullaluistemadka: rullaluistemadka aan awood lahayn, silsilad hal silsilad ah, silsilad labalaab ah, "O" rullaluistemadka suunka, rullaluistemadka duuban, rullaluistemadka gogosha.
Jaangooyaha oo go'an: qaabka gu'ga nooca, nooca ilkaha usheeda dhexe, nooca tenon buuxa, oo loo maro nooca godka biinanka.
Rullaluistemadka wuxuu ku habboon yahay inuu gudbiyo dhammaan noocyada sanduuqyada, boorsooyinka, rugaha iyo alaabada kale. Qalabka jumlada, maqaallada yaryar ama maqaallada aan caadiga ahayn waxay u baahan yihiin in lagu dhajiyo sariirtaada ama lagu rido sanduuqyada wareega. Waxay qaadi kartaa hal shey oo culus ama waxay qaadi kartaa culeys weyn.
Hore: Double jeexdin jeexdin rullaluistemadka
Xiga: Rubber dahaarka leh koofiyad gudbinta rullaluistemadka
Jihada horumarka ee xamuulka ...
Sababaha iyo tallaabooyinka ka hortagga suunka co ...
Mabda'a shaqeynaya ee xambaaraha suunka
Room 227, dhismaha 1, 656 Qixing Road, Wuxing District, Huzhou City, Gobolka Zhejiang, China
Hada Naga Soo wac: 0086-13325920830